Jawaab: Manchester United oo Taageerayaasha Sevila ku kordhisay qiimaha ay ku gelayaan Garoonka | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Jawaab: Manchester United oo Taageerayaasha Sevila ku kordhisay qiimaha ay ku gelayaan Garoonka
(10-1-2018) Kooxda kubada Cagta Manchester United ayaa jawaab ka bixisey qiimo kordhin dhanka Tigidhada ah oo ay Samaysey kooxda Sevilla iyaga oo dhankooda kordhiyey qiimaha Tigidhada lagu daawan doono kulanka ka dhacaya Garoonkeeda.
Naadiga Sevilla ayaa kordhisay qiimaha Tigidhada kulanka Wareega 16 ka ee ah lugta koowaad ee Champions League ee ka dhacaya Garoonka Ramon Sanchez Pizjuan Stadium iyaga ka dhigay £89 kursi walba oo ay fariisanayaan Taageerayaasha Manchester United.
Manchester United ayaa isku dayday in ay Wadahadalo lafurtaan Maamulka kooxda Sevilla si ay u yareeyaan qiimaha lacageed ee lagu gelayo Garoonkooda balse fashil ayuu ku dhamaaday.
Maamulka Manchester United ayaa Go aan ku gaaray in ay kordhiyaan qiimaha lacageed ee lagu daawan doono kulanka lugta labaad ee ka dhacaya Old Trafford waxayna Gaarsiiyeen £133.taas oo jawaab u ah qiimo kordhinta Sevilla ee dhanka Tigidhada kulanka ka dhacaya Garoonka Ramon Sanchez Pizjuan Stadium.
Sevilla ayaa sidaan oo kale qiimaha Tigidhada kordhisay kulankii Wareega Gruubyada ee Champions League ee ay lacayaareen Liverpool waxayna gaarsiiyeen £54.